Mgbakwunye Visa ndị njem na Thailand amachibidoro ugbu a
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Thailand » Mgbakwunye Visa ndị njem na Thailand amachibidoro ugbu a
Ụnyahụ bụ ụbọchị ikpeazụ maka ndị ọbịa na Thailand itinye akwụkwọ maka ndọtị visa ụbọchị 60 maka COVID-19
A na-atụ anya ịgbatị ya, mana mbata na ọpụpụ Thai gosipụtara na Wenezde, Jenụwarị 26 na amachibidoro ndọtị visa dabere na ikike Covid. N'agbanyeghị enghota bụ ndị mba ọzọ batara na mbụ n'Alaeze ahụ na visa njem nlegharị anya ụbọchị 60, nke ụlọ ọrụ diplomatic Thai nyere na mba ofesi, ma ọ bụ nwee akwụkwọ ikike visa ụbọchị 30 na stampụ na ọdụ ụgbọ elu Bangkok.
Ndị na-ejide visa ndị na-abụghị ndị mba ọzọ nke ụdị ọ bụla enweghị ike gbasaa ma ọ bụ megharịa ọnụnọ ha site na iji ụzọ Covid.
Otú ọ dị, ndị mba ọzọ nwere ike ịga n'ihu na-enweta ndọtị nke ọnụnọ ma ọ bụrụ na ha iru n'okpuru iwu nke visa na-abụghị mba ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ndị nwere visa ndị na-abụghị ndị mbata na-adabere na ezumike nká nwere ike ịga n'ihu na-enweta mgbatị ha kwa afọ ma ọ bụrụhaala na ha nwere ụlọ akụ ma ọ bụ akwụkwọ nnọchiteanya dị mkpa dị ka ọ dị na mbụ.
The ebumnuche n'ihi na iwu ọhụrụ metụtara Covid bụ na ezi uche webatara afọ abụọ gara aga ịgbatị oge ọnụnọ nke "ndị njem nlegharị anya" ndị ọrịa na-efe efe tọrọ. Ndị mmadụ na-ejide visa ndị na-abụghị ndị mbata na-eche na ha nọ na ezumike.
A na-enye ndị ọbịa na-enweghị ike ịgbatị ma ọ bụ megharịa visa ha na Thailand ụbọchị 7 ịhapụ obodo ahụ. Mgbatị Covid maka “ndị njem nlegharị anya” ka tozuru oke dị ruo Machị 25, 2022
Seychelles gosipụtara na FITUR 2022 na Spain
Netwọk Nlegharị anya n'ụwa gbara ndị obodo mba ume ka ha na-elekwasị anya
PM Tanzania na-enwe obi abụọ na ọ ga-abụ Kilimanjaro…
Skal International Bangkok ga-ahọpụta onye isi ala ọhụrụ na…
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na Costa Rica na-agba ume na WTM ọhụrụ...
A na-enye onye ọrịa mbụ ọgwụ na akwara akwara.
Ọnwụnwa ụlọọgwụ ọhụrụ maka gastrostomy ụmụaka
Nsonaazụ nnwale ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa COVID-19-influenza dị ugbu a
Ọdịnihu nke njem azụmahịa
Thomas Cook India gbasaa na Gujarat
Nha ahịa ndị na-ehicha ụlọ ọrụ, oke, ụlọ ọrụ...